Noelin-dry zareo any Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Noelin-dry zareo any Karaiba	Voadika ny 28 Desambra 2008 15:00 GMT
Zarao: Noely ny andro – Ary tsy misy n'aiza n'aiza mankalaza ny Noely ohatran'ny any Karaiba! Inty misy topi-maso kely ny amin'ny ataon'ny mpitoraka blaogy avy any Karaiba mba ho tafiditra ao amin'ny fanahin'ny fankalazàna…
Ny mpitoraka blaogy avy any Guyana dia nanao “meme” amin'ny hoe “Tsy Krisimasy ny Krisimasy rehefa tsy misy …” Ho an'ny Signifyin’ Guyana, izay nanomboka an'ilay “meme”, dia hoe “ny nofon-kenan-kisoa nataon'i dadanay” sy “filalaovana lalao iraisana miaraka amin'ny fianakaviako rehefa avy nihinana sy ny sisa.” Guyana 911 dia maneho ny heviny (indraindray amin'ny fomba mandranitra) amin'ity lisitra manaraka ity:
- Fanadiovan-trano mandritry ny Noely
Oay le.. Fa nisy inona tato amin'ity trano ity? Hifindra trano angaha ianareo?
- Pepper Pot.
Ny fotoana, sy ny fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahan'i Jesosy dia mandeha alohan'ny pepper pot. Tsy miodina intsony ve ny tany raha tsy manao pepper pot ianareo?
- Mofomamy misy voankazo maina.
- Hazo noely.
Tapaho daholo ireo, fa aza anaovana karatra firarian-tsoa ho an'ny Noely. Tsia… Aleo hanaovana fanaka. Hevitra mitondra fiovana tanteraka izany izao. Fanaka… zavatra izay azon'ny olon-drehetra ampiasaina amin'izao fotoana izao.
- Dokambarotry ny marika Singer.
- Fandokoana trano sy izay zavatra hafa azo lokoina.
Raptus8 dia mieritreritra fa ny fanolorana fanomezana dia tsy afa-misaraka amin'ny Noely (raha ohatra ka izy no hotolorana ilay fanomezana):
Efa miresaka fanomezana ihany isika dia te-hiteny amin'ny namako sy ny fianankaviako aho, fantatrareo fa tiako be ianareo fa amin'ity taona ity dia aza manantena afa-tsy karatra firarian-tsoa ho an'ny Noely avy amiko azafady.
Tsy manam-bola aho; eny tsy misy saosy mihitsy aho… inona? Nahazo fisondrotana moa izaho tamin'ny farany teo? Ie nefa tsy manan-karena aho ary te-hanan-karena, noho izany dia tehiriziko ny volako. Manantena aho fa azonareo ny toerana misy ahy ary koa tsy hahasakana anareo hividy an'ilay zavatra manokana efa fantatrareo izay misy ny anarako eo amboniny…
Any Jamaika, Iriegal dia miteny fa na dia midika hoe miaraka amin'ny fianakaviana aza ny Krismasy, ny fahasahiranana ara-bola eran-tany dia misy fiantraikany eo amin'ny fandefasam-bola sy ny fanomezana alefan'ny diaspora ho aty Jamaika:
Fantatsika fa fotoanan'ny Krismasy any Jamaika rehefa manomboka mihodina ny barika.
somary “nasira” kely ny toe-javatra tamin'ity taona ity. Nataon'ny toe-karena ho tsy dia fahita intsony ny ankabeazan'ny entana ary ny saram-pandefasan-javatra dia tsy mitsahatra ny misondrotra. Ankehitriny dia “karatra firarian-tsoa” no alefan'ny olona..
Izy koa dia manamarika fa ity fihisaran'ny toe-karena ity dia mampiova ny fahatsapana an'ity Noely ity:
Ny Krisimasy dia tsy Krisimasy rehefa tsy misy deh white dem. (Toaka fotsy Jamaikana). Ampiasainay anaovana “sorrel” io, Mofomamy amin'ny Noely, “Pudding” amin'ny Noely sy ny sisa. Noho izany maninona ny tompon'ny Wray and Nephew no nandroaka ny mpiasa alohan'ny Krisimasy? Tsy mandrora mitsilany ve izany?
Ny fahatapahana dia miparitaka eran'ny nosy, ohatran'ny any amin'ny toeran-kafa eran-tany. Ny fihisaran'ny toe-karena izay manjo ny USA dia eran-tany. Toa mikororosy daholo ny zava-drehetra. Ny mampalahelo dia hoe ireo nosy kely no tena mahita faisana bebe kokoa amin'izany . Raha tsy manao n'inon'inona ianao, tsy mahazo n'inon'inona ary ny vahoaka dia miezaka manala an'io “n'inon'inona” io lavitra anao, mahatohina izany.
Aleon'ny Abeng News Magazine mamerina an-tsaina ny lasa, mijery ny Krisimasy tamin'ny “Jamaika fahiny” ato sy ato.
Ny The Devil Island.com-n'ny Bermudes dia nahafantatra ny hoe Krisimasy izay rehefa nihira ny Feliz Navidad i Jose Feliciano, ary miteny hoe:
Miniana aho, fa tsisy hira krisimasy tsara indrindra sy mampifalifaly toy iny.
Ny mpitoraka blaogy avy any Trinidad This Beach Called Life dia manamafy, ary miantso azy ho “hira Krisimasy tsara indrindra amin'izay rehetra misy” ary dia nandefa horonan-tsarin'i Feliciano mihira ny hira nahafantarana azy. Manazava izy:
Jose Feliciano dia mpitendry gitara tafita ary mihira amin'ny “style” sy feo miavaka. Lasa hira Noely “classique” i Feliz Navidad ary ankehitriny dia tsy azo sarahina amin'ny fotoanan'ny Krisimasy izy. Feliz Navidad dia iray amin'ireo hira Krisimasy 25 hiraina sy raketina be indrindra eran-tany.
Na izany aza, mpitoraka blaogy avy any Trinidad sy Tobago Coffeewallah dia mahita hoe sarotra ny manakatra ny fanahin'ity vanim-potoana ity:
Matetika aho no maheno olona miresaka momba ny finoana ‘Kristianina’. Mampiomehy ahy foana fa ireny milaza ho mpino Kristianina ireny indrindra no tena manome lamosina rehefa misy fanentanana amin'ny fanangonana “kapoaka” na hafa. Ireny olona ireny ihany izay tonga manentana anao foana foana, mba handray anjara amin'ny “loterie”-n-janany na tsy haiko hoe inona koa, rehefa anontaniana ry zareo, ny valinteny mazàna dia hoe, Efa nanome tamin-javatra hafa aho roa volana lasa izay. Tsy maintsy mahatadidy an'ity iray ity aho amin'ny manaraka. Tonga hatraty ny fitondran-tena Grinch.
Nefa ny fototry ny Krisimasin'i Trinidad sy Tobago dia ao anatin'n'ny toe-po tsara sy mendrika:
Namelana ny pointsettias, ny raviny menamena sy matsilo dia manome famirapiratana ny toerana izay maizina amin'ny ankapobeny. Na dia nanorana aza ny andro, nafana ny tany anatinay, niaraka tamin'ny ponche de creme nanafana anay, sy hira Krisimasy vitsivitsy hiraina… dia manja foana ihany.
Efa miresaka ny fototry ny Krisimasy ihany, Simply Trini Cooking dia manome voninahitra an'ilay desera malaza avy any Inde andrefana, Black Cake, ary nanome ny “zavatra rehetra ilaina” sao misy te-hanandrana hanao.
Barbados Underground dia mandefa fampatsiahivana momba ny anton'ny fety ary maneho ny fanahiany amin'ny fivoizana ny resaka varotra mandritry ny fialan-tsasatra:
Ny Krisimasy 2008 dia hankalazaina ao anatin'ny tontolo maloky ny toe-karena nefa ho an'ny Barbadianina dia toa ny fitondran-tenany tamin'ny taona lasa ihany no arahany…izay mahita fa ny ankabeazan'ny mponina dia marisika ny hankalaza ny Noely noho ny antony ara-barotra.
Mahita akony koa izay fanahian'i BU izay ao amin'ny Dominica Weekly, izay mieritreritra momba ny tena dikan'ny Noely ary lasa lavitra amin'ny fanontanian-tena ny amin'ny mety ho eritreretin'Andriamanitra momba ny fankalazan'ny andro maoderina.
Ny fankalazana ny Noely any amin'ny Karaiba frantsay, amin'ny lafiny iray, dia toa tafalatsaka ao amin'ny fomban-drazana. Efa manakaiky haingana ny 25 Desambra, ny departemanta frantsain'ny Outre Mer ao Guadeloupe, Martinique sy Guyane dia ampangovirin'ny feon'ny zava-maneno nentin-drazana toy ny ka (amponga lehibe)[Fr] sy ti-bwa (vatam-bararata be roa)[Fr] sy ny hira Krisimasy. Tongasoa eto amin'ny tontolon'ny “Chanté Nwel” (hira ho an'ny Krisimasy)!
Ao amin'ny blaogy Sous le Soleil de Guadeloupe [Fr], Pat sy Jac dia manoritsoritra ny toerana saro-takarina misy ny nosy, izay sondriana amin'ny Noely nefa koa ao anatin'ny krizin'ny solika. [En].
Na eo aza izany rehetra izany, misy zavatra iray izay maharitra ao amin'ny fankalazana amina'ny fomba nentin-drazana ny Noely any Guadeloupe ary izy io dia ny “Chanté Nwel”. Teny Creole [En] entina milaza ny “Fihirana ho an'ny Krismasy” na “Mihira Krismasy (hira)”, io no mariky ny Noely any amin'ireo faritra frantsay ireo. “Chanté Nwel” dia fanararaotan'ny fianakaviana manontolo mba hitsidihana ny mpiray vodirindrina sy mihira hira Krisimasy miaraka aminy amin'ny feon'ny “ka” sy ny “ti-bwa”. Tamin'izany fotoana izany, mbola am-pilaminana no andehanan'ny olona miala lavitra ny tanàny amin'ny alina.
Na dia tsy toy ny taloha intsony aza ny fankalazàna ny Chanté Nwel, mbola mahatsapa ny filàna mihira miaraka ny hiran'ny Krisimasy ihany ny mponina ary amin'ny fomba tena vokatry ny tany. Tsy nankalaza ny Krismasy ianao raha tsy tany amin'ny “Chanté Nwel”! Toa ohatran'ny fomban-drazana tena manaitra izy ity hany ka na ny diaspora avy any Inde andrefana aza te-hankalaza azy. Ao amin'ny blaoginy Risbomontréal [Fr], mpianatra izay eny amin'ny anjerimanontolo any Guadeloupe no manoritsoritra ny hafaliany nahazo fanasana ho hanatrika “Chanté Nwel”:
Quelle bonne nouvelle que j'ai eu ce matin en ouvrant mon p'tit mac 😀 ! La news lettre de ces types super cool de Tropikal97 où ils invitent à participer à une super soirée diner/Chanté Noël + Boite de nuit à l'antillaise et tout ^^ !!!
Vaovao tsara be no azoko androany maraina raha nanokatra ny Mac-ko aho :D! Tao amin'ny vaovaon'ireny bandy cool-n'ny Tropikal97, nisy fanasana amin'ny fisakafoanana/Chanté Nwel sy toeram-pandihizana Indiana tandrefana sy ny sisa ^^!!!
Toa miparitaka any amin'ny toerana rehetra misy Indiana Tandrefana frantsay ny tazon'ny Chanté Nwel : porofon'izany ity fanasana ho an'ny Chanté Nwel ity tany Cergy, faritra ambanivohitry Paris, navoakana andiana Indiana tandrefana ao amin'ny blaogy Carrefour du Soleil [Fr]. Na henoy Cactus, tarika mpihira vakodrazana avy any Guadeloupe izay mampahafantatra ny Chanté Nwel ao amina blaogy antsoina hoe Cactus Chanté Nwel [Fr]. Ahitana horonan-tsarin‘ny Cactus mihira hira Krisimasy koa ao, amin'ny teny créole (kiriolona) .
Tsy afaka mankany amin'ny Caraibe amin'ity Noely ity? Aza matahotra – Ny hafanan'ny Indiana Tandrefana dia tsy voasakan'ny elanelan-tany noho ny feon'ny mpitoraka blaogy izay nizara ny tantaran'ny Krismasiny tany Cuba, St. Vincent sy ny Grenadines, ny nosin'i Cayman , ary Puerto Rico. Sasany amin'ireo “afatra ireo dia manana fijery miabo kokoa noho ny hafa, misy fihetseham-po azo tsapain-tanana tamin'ity vanim-potoana: ny Fanantenana.
Raha araka an'i Womanish Words mpitoraka blaogy iray avy any Bahama dia :
Tampoka teo, antoko mpihira. Mihira ny Deck the Halls ry . Hita avy eo ambadikin'ny haizin'ny varavaran-kelin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Mahafinaritra ny hirany.
Mety ho tiako ny naheno mpihira “cantique” na iza izy na izy, na dia ny mikiakiaka, noraisiko am-pifaliana izy amin'izao andro sarotra izao. Na inona na inona vondron'olona misokatra, tia mamorona, mahay miara-miasa sy mifandray, manana fanahy ampy hifanohana sy hifameno ary hihira ny Noely ho an'ny hafa fiaviana, tsy maintsy tiako ry zareo ireny. Indrindra indrindra ankehitriny, rehefa kely ny vola, ary ny “fondamentalisme” dia mampisarantsaraka ny fiarahamonina noho ny fankahalana, ary mailo amin'ny herisetra daholo ny rehetra. Nanokatra varavarana izahay, nampirehitra jiro, ary nanome fanomezana. Nanao satroka dadabe Noely daholo izy rehetra. Toa mpihira avy tao anatin'ny bokin'i Dickens . Rindram-poe kanto, beso manaka-danitra. Nanontany ny zanakay, “Mihira hoantsika ve ry zareo?” Ie, mihira ho antsika ry zareo.
Tamiko iny fotoana iny dia toy ny tsy roa aman-tany , marika iray sy vetso iray, hafatra avy any amin'ny tontolon'ny Fanahy. Raha tsorina ny resaka, ‘ndeha àry haingoy ny tranonareo, miezaha mba ho faly, mankalazà, manoméza. Ataovy izany mba hanoherana ny tahotra, mba hanovàna izany fiainan-tsambatra .
Fabienne Flessel koa dia nandray anjara tamin'ity hafatra ity .
Ny sary rehetra janinephoto; dia nahazoana alalana avokoa.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraJanine Mendes-Franco
7 andro izayJamaikaNahazo Aina Vaovao Indray Ilay Afisim-pizahantany Mametraka An'i Jamaika Ao Anaty Sarintany
7 andro izayGoianaPolisy Manamboninahitra Goianey Nosaziana Fa Bevohoka
Amerika LatinaKaraibaBarbadosBermudaDominikaGoadelopaGoianaGoiana FrantsayHaitiJamaikaKiobàMartinikaNosy CaymanPôrtô Rikô (Etazonia)St. Vincent & the GrenadinesTrinite sy Tobago
Fifindrà-moninaFivavahanaSakafoTeratanyToekarena sy FandraharahànaZavakanto & Kolontsaina